HORDHAC: Liverpool vs Bayern Munich-Shaxaha Macquulka Ah, Dhaawacyada & Ganaaxyada Iyo Xogta Kulamadii Hore Ee Reds & Bavaria. - GOOL24.NET
HORDHAC: Liverpool vs Bayern Munich-Shaxaha Macquulka Ah, Dhaawacyada & Ganaaxyada Iyo Xogta Kulamadii Hore Ee Reds & Bavaria.
Liverpool iyo Bayern Munich ayaa caawa isku haleeli doona lugta koowaad ee wareegga 6-ka tartanka Champions League, kaas oo kusoo beegmay xilli ay kooxuhu ku jiraan marxalado kala duwan.
Liverpool oo xili ciyaareedkii hore tagtay finalka Champions League oo ay Real Madrid ciyaartii ugu dambaysay kaga adkaatay 3-1 ayaa waxay ka hortegaysaa Bayern Munich oo lix jeer ku guuleysatay tartankan.
Reds oo si dhibaato leh kaga soo gudubtay wareeggii koowaad oo laba ciyaaarood oo isku xigtay ay PSG iyo Red Star Belgrade u xambaariyeen ka hor intii aanay Napoli ka helin fursadda ay wareeggan ugu soo baxday, ayaa waxay u mahadcelisay Mohamed Salah oo daqiiqaddii 34aad u dhaliyey goolkii ay kaga adkaadeen Napoli bishii December.
Halka uu goolhaye Alisson Becker ahaa badbaadiyaha ciyaartaas oo uu daqiiqaddii ugu dambaysay isku duubay kubbad quus ka dhigi lahayd, waxaana ay sidaas kaga soo baxeen Groupkii dhimashada ee C.
Inkasta oo ay finalka tagtay xili ciyaareedkii hore, haddana rikoodhka Liverpool ee tartanka ugu qiimaha badan Yurub ma ahayn mid farxad gelinaya jamaahiirta, waxaana siddeedii kulan ee ugu dambeeyey ay khasaareen shank a mid ah halka ay saddex kaliya badiyeen, waxaana uu rikoodhkaasi uga soo bilaabmay dhamaadka tartankii hore ee niyad-jabka uu u horseeday goolhaye Karius.
Tababare Klopp ayaa sidoo kale rikoodh xun uu u diiwaangashan yahay, waxaana uu guul-darrooyin la kulmay afar kulan oo isku xiga oo ay Liverpool kusoo ciyaartay garoomada dibedda, balse nasiibkooda ayaa ah in caawa ay ciyaartan garoonkooda joogaan.
Arrinta farxadda gelinaysa taageereyaasha Liverpool ayaa waxay tahay in 19 ciyaarood oo xidhiidh ah oo ay ku ciyaartay garoonkeeda, kana tirsan tartamada Yurub aan hal marna laga adkaanin, waxaanay guuleysteen 14 ka mid ah, iyadoo ay guul-darro Anfield kusoo gaadhana ugu dambaysay October 2014 oo ay Real Madrid kaga adkaatay.
Rikoodhkan wanaagsan, waa midkii labaad ee Liverpool ay taariikhdeeda ku samayso garoonkeeda, waxaana uga horreeyey 40 kulan oo xidhiidh ah oo sannadihii u dhexeeyey September 1974 illaa December 1991-kii aan garoonkeeda lagaga badinin.
Liverpool oo soo qaadatay toban maalmood oo nasasho ah maadaama aanay tartanka FA Cup ee kooxaha kale ee Ingiriisku ku mashquuleen ay xili hore ka baxday, ayaa waxa si guud loo eego lixdii ciyaarood ee ugu dambeeyey ee tartanka Champions League waxay haysataa saddex guulood iyo saddex khasaare, waana arrin walaaceeda le, balse si ay ugu hamiyaan wareegga siddeedda, waa inay Bayern Munich kaga adkaadaan Anfield oo ay sii wadaan rikoodhka wanaagsan ee ay ka haystaan.
Dhinaca kale, Bayern Munich oo uu xili ciyaareedkani ugu bilaabmay qaab xun, isla markaana ay bilowgii hore halis gashay shaqada tababare Niko Kovac ayaa dib u heshay qaab ciyaareedkeedii wanaagsanaa qaybtii dambe, waxaana ay hadda kusoo laabatay tartanka Bunesliga, iyadoo 22 kulan oo ay ciyaartay ka heshay 48 dhibcood, isla markaana saddex dhibcood oo kaliya ka hoosaysa Borussia Dortmund oo hoggaanka haysa.
Marka laga yimaaddo toddobada kulan ee xidhiidhka ah ee horyaalka, Bayern waxa kale oo ay ku tartamaysaa koobka German Cup, halka uu Champions League yahay riyadooda koowaad ee xili ciyaareedka oo ay dooneyso inay saddexleydaba ku guuleysato sannadkan.
Marxaladdii koowaad ee Champions League ama Groupyadii, Bayern Munich waxay ku jirtay shan kooxood oo aan laga adkaanin, waxaanay kooxaha kale ahaayeen Ajax, Barcelona, Lyon iyo Porto, waxaana hammigeedu yahay in markii siddeedaad ay tagto semi-finalka tobankii sannadood ee ugu dambeeyey, taaas oo ah rikoodh ay ku niyad-jabinayso Liverpool.
In Bayern Munich ay guul-darro kala soo laabato ciyaar ay marti tahay, waxa ugu dambaysay September 2017 kulan ay u tagtay PSG, waxaana intii ka dambaysay ay ka badbaaday in dhinaceeda dhulka la dhigo toddoba ciyaarood oo xidhiidh ah, waxaanay dooneysaa inay mar kale gaadho natiijooyinkii ay diiwaangashatay October 2012 illaa April 2014 oo ahaa toban kulan oo xidhiidh ah oo ay kusoo ciyaartay garoomada dibedda oo aanay wax guul-darro ah la kulmin.
Kooxda haysata horyaalka Bundesliga, waxay dhibaato ka haysataa khadka dambe oo difaacca, waxaana laba kulan oo ka tirsanaa marxaladdii hormooyinka ee Group E ay Ajax Amsterdam ka dhalisay saddex gool, halka ciyaartii German Cup ee Herta Berlin ay u baahdeen wakhti dheeraad ah, balse kulankii ugu dambeeyey ee Bundesliga ee usbuucanna ay laba jeer ka daba yimaaddeen Augsburg oo goolal kala hor martay, laakiin ugu dambayn uu tababare Kovac guusha u damaashaaday.
Marka si guud loo eego, lixdii ciyaaarood ee ugu dambeeyey ee tartanka Champions League, waxay guuleysteen afar ka mid ah, labada kalena barbar-dhac ayey galeen.
Ciyaarta: Liverpool vs Bayern Munich
Tartanka: Champions League, kulanka koowaad ee wareegga 16-ka.
Garoonka: Anfield, Liverpool, Merseyside, England, UK.
Garooraha: Gianluca Rocchi (Italy)
Liverpool ayaa waayi doonta ciyaartan difaacyahannada Dejan Lovren iyo Joe Gomes oo dhaawacyo ku maqan, waxaase madax xanuun ku ridaya tababare Jurgen Klopp laf-dhabarta khadkiisa dambe ee Virgil van Dijk oo ganaax ku seegaya kulankan kaddib laba kaadh oo huruud ah oo uu qaatay.
Klopp ayaa khadkiisa dambe ee difaaca waxa uu geyn doonaa Fabinho oo uu lammaanayn doono Joel Matip, iyadoo garbahana ay ka ciyaari doonaan Trent Alexander-Arnold oo kasoo laabtay dhaawac iyo Andy Robertson, halka Salah, Mane iyo Firminho ay afka hore ee weerarka hoggaamin doonaan.
Kooxda martida ah ee Bayern Munich, waxa taam u noqday laacibka reer France ee Kingsley Coman oo kasoo doogay jugo kasoo gaadhay ciyaartii Augsburg oo uu laba gool dhaliyey, hase yeeshee waxa maqnaan doona Thomas Muller oo ganaax ah, Jerome Boateng iyo Corentin Tolisso.
Rikoodhka kulamadii hore u dhex maray labada kooxood
Labadan kooxood ee guulaha badan ka gaadhay tartanka Champions League, waxay hore ugu kulmeen tartan Yurub ah, lix jeer oo kaliya, is-araggoodii ugu dambeeyeyna waxa kasoo wareegtay ku dhawaad 20 sannadood, waxaanu ahaa UEFA Super Cup oo sannadkii 2001 ay ku wada ciyaareen magaalada Monaco.
Ciyaartaas iskugu dambaysay, Liverpool ayaa ku adkaatay 3-2, sidoo kalena semi-finalkii Champions League ee 1980-81 ayaa gool uu kulankii lagu ciyaarayay garoonka Munich ku dhaliyey Ray Kennedy ay Liverpool ugu gudubtay finalka.
Xili ciyaareedkii 1971-72, ayay labadan kooxood isku haleeleen semi-finalka European Cup Winners’ Cup, waxaana libinta la hoyatay Liverpool.
Marka si guud loo eego, lixda jeer ee ay iska hor yimaaddeen, laba waxa guuleysatay Liverpool, afarta kalena barbar-dhac ayay galeen.
Saddex jeer oo Bayern Munich ay ku ciyaartay garoonka Liverpool ee Anfield, dhamaantood waxay ka baxday iyadoon hal goolna ku dhalinin.